निशानको फुटबल स्टार बन्ने अधुरो सपना, कसरी भयो अपहरणपछी हत्या ? – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
निशानको फुटबल स्टार बन्ने अधुरो सपना, कसरी भयो अपहरणपछी हत्या ?
भक्तपुर – ‘आमा म एकछिन खेलेर आउँछु है’ भन्दै प्रायः फुटबल खेल्न जाने काठमाडौं महानगरपालिका–३२ काँडाघारी टाउन प्लानिङस्थित चमेली खड्काको ११ वर्षीय छोरा निशान खड्काको फुटबल खेलाडी बन्ने सपना अधूरै बनेको छ।
त्यसपछि निशानले आमालाई खेल्न जान्छु है आमा भनेर गयो । ‘आमासँग खेल्न जान्छु भनेर बिदा लिएको त्यो क्षण उसको अन्तिम बिदाइ बन्नपुग्यो,’ मामा सापकोटाले भने। छोरा खेल्न गएको केही क्षणपछि दुवै अपहरणकारी पनि पसलबाट निस्किए । सधैँ साढे ७ बजेसम्म खेलेर घर फर्कने निशान त्यस दिन साढे ८ बजेसम्म पनि नफर्किएपछि आमाले छिमेकीतिर खोजी गरेकी थिइन्।छिमेकीमा टिभी पो हेर्दै छ कि भनेर सोधीखोजी गर्दै गर्दा करीब ९ बजे चमेलीको नयाँ फोनमा घण्टी बज्यो।
फोन उठाउने बित्तिकै अपहरणकारीले ‘तेरो छोरा हाम्रो कब्जामा छ, छोरा चाहिने भए ४० लाख ठीक पार, प्रहरीलाई खबर गरिस् भने ठीक हुन्न’ भनेर फोन राखिदिएको चमेली बताउँछिन्। पछि पटक-पटक यताबाट फोन गर्दा पनि अपहरणकारीको फोन नउठेको र स्वीच अफ छ भनेपछि आत्तिएकी चमेलीले छिमेकी र नजिकै रहेको माइतीलाई बोलाएकी थिइन्।
बच्चा अपहरण भएको हल्लाखल्ला भएपछि छिमेकीले १०० मा फोन गरिदिएको केहीबेरमै काँडाघाडी प्रहरी बिटबाट प्रहरी आयो भने त्यसको केही समयपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका टोली आएको थियो । बालकका मामा भन्छन्, ‘पैसा दिन्छौँ कहाँ भेट्नेसम्म पनि भन्न पाइएन, पछि फोन नै नगरी भाञ्जाको हत्या गरे अपराधीले।’ प्रहरीको विभिन्न टोली बनाएर खोजी कार्यलाई रातभरि तीव्रता दिएको बताउँदै उनले आफैँ पनि राति ३ बजेसम्म एउटा टोलीमा बसेर भाञ्जाको खोजी गरेको बताए।
प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार खाजाघरमा चमेलीले अपहरणकारीकै अगाडि मलेशियाबाट श्रीमान्ले पैसा पठाइदिएको सुनाए। त्यही सुनेर फिरौती माग्न अपहरण गरेको र अपहरणपछि आफूहरु भाडामा बस्दै आएको मध्यपुरथिमि नगरपालिका–७ नगदेश बुद्ध विहारको तल श्याम लवटको घरमा लगेको अपहरणकारीले बताए।
प्रहरीका अनुसार चिनजानकै व्यक्ति भएकाले अपहरणकारीसँग सजिलै उनीहरुको कोठामा पुगेका निशानकै अगाडि फिरौती रकम मागेपछि निशान कराएर चिच्याएको र पछि अपहरणको पोल खुल्ने डरले हत्या गरेका हुन्। हत्यापछि लवटकै निर्माणाधीन घरको डिपिसीभित्र गाडेर फरार भएको र खोजी गर्ने क्रममा सूर्यविनायक जंगलमा प्रहरीको गोली लागि दुवै अपहरणकारीको मृत्यु भएको थियो।
दुई छोरी र एक छोरालाई आमाको जिम्मा लगाएर मलेशिया गएका गणेशले घटनाका बारेमा हिजो राति मात्रै थाहा पाए। मलेशियामा सँगै बसेका छिमेकी भाइले घटना हिजो दिउँसै थाहा पाए पनि उनले राति मात्रै थाहा पाएपछि मलेशियामै शोकमा डुबेका छन्। गत फागुनमा ४० दिनको बिदा लिएर नेपाल आएका गणेश गत चैत १३ गते मलेशिया फर्किएका हुन् । छोरासँगको उनको अन्तिम भेट १३ गतेका लागि लेखेको रहेछ आफन्त भन्छन्। गणेश मलेशियाबाट आउँदो बिहीबार साढे १ बजेको फ्लाइटमा नेपाल आउने भएका छन्।
स्थायी घर मेलम्ची नगरपालिका–९ दोबाटो रातामाटामा रहेका निशानका हजुरबुबा दुर्गाबहादुर खड्का र आफन्त पनि शोकमा डुबेका छन्। नातिको हत्याको खबरले हिजो दिउँसैदेखि हजुरबुबा निकै पीडामा रहेको र आज मेलम्चीबाट काठमाडाैं आइपुगेका परिवारका सदस्यले बताए । हिजो राति चमेलीलाई माइती घर लगिएको छ । चमेलीले होटल चलाउँदै आएको स्थानभन्दा केही माथि काँडाघारीमै बस्दै आएका माइतीमा पुगेपछि पनि चमेली र माइतीपक्ष शोकले रातभर जागै छन्।
चमेलीका बुबा मीनप्रसाद सापकोटा आफैँ सम्हालिन सकेका छैनन्। नातिको सपना अधुरै भो भन्दै आफैँ रुँदै छोरीलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेका छन् । आज शवपरीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि परिवारका अधिकांश व्यक्ति र टोल छिमेकका केहि व्यक्ति शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए।
यता कक्षा ६ मा निशान पढ्दै आएको स्कूल हाइल्याण्ड इङलिस स्कूल पनि आज बन्द गरिएको छ । आफ्नो स्कूलको विद्यार्थीको अपहरण गरी हत्या गरेको शोकमा स्कूल बन्द गरिएको प्रधानाध्यापक प्रल्हाद खड्काले बताए । स्कूलमा पनि फुटबल खेल्न नै धेरै मन पराउने निशान फुटबल खेलाडी बनेर देशको नाम राख्छु भनेर भन्ने गरेको खनाल सुनाउँछन्। स्कूलमा कसैलाई नराम्रो व्यवहार नगर्ने, प्रायः सधैँ स्कूल आउने अनुशासित विद्यार्थी भएको बताउँदै निशानको हत्याले सिंगो स्कूल परिवार शोकमा डुबेको उनले बताए। मृतक निशानका बाबु गणेश आगामी बिहीबार १ः३० बजेको फ्लाइटबाट नेपाल आएपछि बालकको सोहिदिन नै दाहसंस्कार गरिने उनका परिवारले जनाएको छ, शुभदिनले लेखेको छ ।